MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 24 August 2008
(လက်သီးပုံ - http://mattaronson.wordpress.com/)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 30.8.080COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 29.8.080COMMENTS
၀မ်းနည်းပါတယ်.. မစ္စတာ စမတ် ရယ်...
"နေ့ပြောနောက်ကြည့်၊ ညပြောအောက်ကြည့်" ဆိုသော မြန်မာစကားပုံလေးတစ်ခုရှိပါသည်။
ယခုအခါမှာတော့ သနားစရာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Samak တစ်ယောက် သူ့ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်မသက် ဖြစ်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့အတွက် ဗမာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဆီက ညစ်နည်းမျိုးစုံ အကြံဥာဏ်တွေ တောင်းနေရပြီလား.... (ဒါမှမဟုတ်) ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရားထူးကနုတ်ထွက်ပေးဖို့ အထုပ်ပြင်နေရရှာပြီလား ဆိုတာကတော့ .........
"Thai PM suggests UN talks with Myanmar on democracy, constitution, elections only"
BANGKOK, Aug 25 (TNA) -- Thai Prime Minister Samak Sundaravej on Monday suggested that the United Nations should only discuss democracy, constitution and elections with Myanmar.
Mrs. Suu Kyi's National League for Democracy wonalandslide victory in the general elections held in 1990 but was prevented from taking the reins of government by the military junta which has ruled the country since 1962.
Prime Minister Samak said he planned to attend the UN General Assembly annual meeting in late September and that he planned to "sell this idea" during the meeting, as Thailand is now chair of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 28.8.080COMMENTS
A POEM DEDICATED TO PEOPLE WHO BURIED THE NARGIS DEAD BODIES
ရွာကလေးနာမည်က ချောင်းလေးရဲ့ နာမည်
အဲ့ဒီချောင်းလေးကနေ ဓမြတွေ ချောင်းချောင်းတိုက်လို့
ဓမြချောင်းက ဘိုကလေးပိုင် မိန်းမလှကျွန်းအနီး
အခုတော့ နာဂစ်က ဓမြချောင်းခေါ် ခေတ်သစ် ဓမ္မသုခကိုဝင်မွှေ
အဲ့ဒီမှာ နာဂစ်မန်မိုရီပက်(စ်) လုပ်ဖို့
ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းပဲ အလောင်းတွေ ကောက်ခဲ့တယ်
ကဗျာဆရာဆိုတာ ကျရာတာဝန်ထက် သူများမလုပ်ချင်တာလုပ်မှ
ဓမြချောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ဓမြတွေ ချောင်းရိုက်သွားတယ်။
ဓမြချောင်းက လက်ခံပေမဲ့ ဓမြတွေက လက်မခံဘူး
လွတ်လပ်စွာစာနာ ၀မ်းနည်းမှုတွေ လုပ်နိုင်မလဲ
ဓမြချောင်းမှာ ငါတို့ကို ဓမြတွေ ချောင်းရိုက်ကြတယ်။
(မိမိတို့ စေတနာဖြင့် အလောင်းကောက်ခဲ့သော မိတ်ဆွေများနှင့် အဖမ်းခံရသော ကိုအောင်ကျော်ဆန်း၊ ဒေါက်တာနေ၀င်းတို့နှင့် နာဂစ်စွန့်ပယ်အလောင်းများအတွက်)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 25.8.080COMMENTS
Labels: NARGIS CYCLONE, OTHERS' POEMS
A POEM DEDICATED TO PEOPLE WHO BURIED THE NARGIS D...
Sitagu Sayadaw U Nyannissara is preaching in Manda...